Ukuhlala Enkulu Endlini Encane - I-Airbnb
Ukuhlala Enkulu Endlini Encane
353 okushiwo abanye
Las Vegas, Nevada, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Lisa
I-Cute, ihlanzekile futhi ithokomele i-Tiny House engaphandle kwendlu enkulu enobumfihlo obuphelele. Itholakala endaweni ethule nephephile yedolobha. I-Red Rock enhle neDowntown Summerlin imizuzu eyi-15 kuphela. Imizuzu engama-20 ukusuka ku-Strip. Uzoyithanda lapha!
*I-Red Rock State Park isivulwe kabusha*
Leli khaya lizodala inkumbulo oyithandayo ongasoze wayikhohlwa! Lesi sikhala somklami sihlanganisa umbhede osayizi wendlovukazi othokomele ozokunikeza ukuphumula okudingeka kakhulu ngenkathi useVegas. Zizwe ukhululekile ukubuka i-Netflix ku-TV enkulu yesikrini esiyisicaba ngenkathi uhlezi endaweni yokuphumula noma okungcono nakakhulu, shwiba i-TV futhi ubukele kusukela ekunethezekeni kombhede.
Jabulela ukunethezeka kwekhishi elifanelekayo elihlanganisa indawo yokuhlala, indawo yokubala, i-microwave, isiqandisi, ihhavini ye-toaster, ipuleti elishisayo, usinki osayizi ogcwele, umenzi wekhofi, nazo zonke izinto ezidingekayo.
Hamba ngomnyango wesibaya esishelelayo ukuze ungene endlini yokugezela yangasese. Ngaphakathi kuneshawa eklanywe kahle, enothayela enekhanda leshawa eyehlayo ukuze kube lula kuwe, ehambisana nokuvela kwendlu yangasese eshaywayo, hhayi efaka umquba.
4.99 out of 5 stars from 353 reviews
4.99 · 353 okushiwo abanye
Indawo enhle kakhulu futhi ephephile. Eduze neRed Rock, Downtown Summerlin, imizuzu engama-20 ukusuka eStrip. Imizuzu nje usuka kude namapaki amahle nezitolo zegrosa.
Siyazithanda izivakashi zethu kodwa siyabuhlonipha ubumfihlo bazo. Bajabulele ukusiza nganoma yini abayidingayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Las Vegas namaphethelo